प्रचण्ड वास्तवमै अपराधी हुन त ? - नेपालबहस
प्रचण्ड वास्तवमै अपराधी हुन त ?
| १४:०७:५८ मा प्रकाशित
नेपालको वर्तमान राजनीति पनि बडो गज्जबको देखिन्छ । हिजो र आजमा देखिएका राजनीतिक रङ्गमञ्चका परिदृष्यहरुले नेपालका राजनीतिज्ञहरुको नाँडी छामीसकेको छ । नैतिकता र ईमानको खडेरी परेको वर्तमान नेपालको राजनीतिमा मूर्ख र मुढेबलको प्रवेशले झनै आतंकित र दर्दनाक अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । राजनीतिक नेतृत्वमा नैतिकता नै नभएपछि त्यसभित्र नीतिका कुरा गर्नु नै बेकार छ ।
जनताको अभिभावक र प्रतिनिधि पात्रका रुपमा अगाडि आएका नेतृत्व पङ्गतीले नीति नै नमानेपछि बेथिति भयो भनेर रोईलो गर्नुको पनि के नै पो अर्थ राख्ला र ? अनि थिति, नीति र नैतिकता सबै कुरालाई रद्दीको टोकरीमा मिल्क्याई दिएपछि कसरी स्वच्छ राजनीतिक संस्कारको परिकल्पना गर्न सकिएला र ?
नेपालको वर्तमान राजनीति बिकृत बन्नुमा को को, के कति भागीदार छन् ? यो व्यक्ति बिशेषले छुट्याउने कुरा भएन । देश चलाउने र मुलुक बनाउने हिम्मत राखेर जनताबाट चुनिएर गएका जनताका प्रतिनिधिहरुमा हिनभावना र नीच स्वभाव भने कहिल्यै गएको देखिएन । जनताले आफैले चुनेर पठाएका आफ्नै प्रतिनिधिप्रति पनि विश्वास गर्ने आधारहरु एकपछि अर्को गर्दै हटदै जान थालेपछि नेपालको दलीय व्यवस्था अब कता जाने हो ? भन्ने यसै अनुमान लगाउन नसकिने अवस्थामा आएर उभिएको देखिएको छ ।
देश विधिमा चल्नु पर्ने हो । अरु जस्तै आफु पनि कानुनका आँखामा समान हुनु पर्ने हो तर कानुननको रखवाला गर्ने सर्बोच्च निकायमा आफ्नै सगोत्री मात्रै छिराउने परिपार्टीले अहिले देशको न्यायालय समेत भागवण्डाको शिकार बनेर दुर्गन्धित बन्दै जान थालेको आभाष कता कता हुन थालेको देखिन्छ ।
सरकार फेरिने बित्तिकै न्यायमुर्तिहरु पनि फेरिने, राजनीतिक नियुक्तिका लागि सधैं नेताका श्रीमतिको फरिया भित्र बेरिने, परिपार्टीले नेपालको न्याय क्षेत्र मात्र हैन अन्य सबै निकाय अहिले यन्त्र मानव झै बन्न पुगेको छ । यसले देशको न्याय निरुपणमा समेत प्रत्यक्ष असर परेको छ । यस्तै गलत संस्कार र संस्कृतिका कारण नै राज्यका अधिकांश सरकारी निकायहरु जनताको नजरबाट गिरेको छ ।
अहिले अदालतमा समेत राजनीति छिरेको छ । अख्तियारमा समेत अघोषित राजनीतिक हस्तक्षेपले पिरेको छ । सरकार सुशासनका लागि भन्दा पनि आफ्ना बिरोधि तह लगाउने काम मै ब्यस्त छ । नेताले लाजै पचाएर बोले पनि जनताले ताली बजाई दिने बिकृत परिपार्टीले राजनीतिक संस्कार र सामान्य ईमान, ईज्जत समेत बाँकी नराखी नेतृत्व तल्लो स्तरसम्म झरेको छ । जनतालाई शान्ति सुरक्षा दिने कसम खाएर देशको शासनसत्ता सम्हालेर बसेको सरकार प्रमूख नै अहिले आफै असुरक्षित भएको अभिब्यक्ति दिन थाल्नुले मुलुकमा नागरिकको सुरक्षा स्थिति के होला ? भन्ने कुरा आफै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीहरुको एकताको मुख्य उद्देश्य नै सत्तालिप्सा बाहेक केही रहेन छ भन्ने कुरा अब सबै नेपाली नागरिकहरुलाई ऐना जस्तै छर्लङ्ग भैसकेको छ । देशको अवस्था कता गैरहेको छ ? भनेर बितेका ६ महिनामा न त कतै सरकार बोलेको छ, न त प्रमूख प्रतिपक्षी दल नै बोलेको छ । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको सुलेशन उप्किएपछिको राजनीतिक गाईजात्रा त झनै घिनलाग्दो र अत्यन्तै निकृष्ट शब्दवाणको दोहोरो बाकयुद्धमा पुगेको छ ।
सुन्नै अचम्म लाग्ने शब्दका बान्कीहरु यस अघि हाम्रा नेताहरुले कुन शन्दूकमा लुकाएर राखेका थिए जुन अहिले ह्यारह्वारती निकाली रहेका र ओकलीरहेका होलान भनेर जनता आफै रणभुल्लमा परेका छन् । देशका महामहिमहरुको भाषणको किताब मात्रै प्रकाशन गर्ने हो भने पनि पुस्तकै पिच्छे हाँस्यविधामा नोबेल पुरस्कार पाउन सक्नेसम्मका हुनसक्ने देखिएका छन् ।
३ बर्ष पहिला गला जोडेर निर्वाचनमा सँगै हिडेका ओली प्रचण्ड अहिले आएर दोहोरो वाकयुद्धमा उत्रिएका छन् । हिजो ओली कै मुखारबिन्दबाट क्रान्तिकारी नेता मानिएका प्रचण्ड अहिले आएर एकाएक अपराधी सावित भएका छन् । ओलीले जे भने उनका धुपौरेहरुले त्यसैलाई गायत्री मन्त्र भनेर सँगसँगै गाएका छन् । अपराधीसँग साँठगाँठ गरेर देशको शासनसत्ता हत्याउने महामहिमहरु चाँहि गहुँतले नुहाएका ब्राम्हण झै शुद्ध गनिएका छन् । यसो हेर्दा प्रचण्ड, प्रचण्ड साच्चै अपराधी नै हुन कि क्या हो ? भन्ने पनि लाग्छ । जनताले पनि अप्ठ्यारो परेको बेला मै पुरानो हिसाबकिताब माग्छ ।
नेपाली कांग्रेसले ५ बर्ष एक्लै प्रधानमन्त्री आउ प्रचण्ड भन्दा पनि हैन म त केपी कमरेडलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउँछु भन्ने प्रचण्ड अपराधी नभएर के साधु हुन त ? आफुले जन्माएर, गोडमेल, मलजल गरेर हुर्काएको पार्टीलाई तिलाञ्जली दिएर एमालेकै कार्यकर्ता विद्यादेवी भण्डारीलाई नै फेरि पनि राष्ट्रपति बनाउने केपी कमरेडको व्यक्तिगत चाहना पुरा गराईदिने प्रचण्ड अपराधी नभए के हुन त ?
आफु नाम मात्रैको दोश्रो श्रेणीको अध्यक्षमा बसेर बैठकको अध्यक्षता समेत गर्न नपाउने बाध्यतालाई पचाउँदै माधव नेपाललाई वरिष्ठ नेता मान्ने प्रचण्ड अपराधी नभएर के हुन त ? माओवादी द्वन्दमा जनताका अधिकार स्थापित गराउन लडेका कैयौं होनहार नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई पाखा लगाउँदै एमालेकै बामदेब गौतमलाई संगठन विभाग प्रमूख र राष्ट्रियसभाको सांसद सदस्य बनाउने प्रचण्ड अपराधी नभएर के हुन त ? पटक पटकका प्रधानमन्त्रीका तिरस्कार र छुद्र बचनवाणलाई पार्टी एकताकै लागि सहन गर्ने प्रचण्ड अपराधी नभए के हुन त ??
हो म पनि भन्छु प्रचण्ड अपराधी नै हुन । हिजो यिनै राजनीतिक दलका नेताका आडमा राजाले शासनसत्ता हातमा लिएर यिनै दलका नेतालाई रत्नपार्क रुङ्गने अवस्थामा पुर्याउँदा र कठबाँसका डण्डाले नेताको टाउको फुटाउँदा आफुले नेतृत्व गरेको जनयुद्धलाई समेत यिनै नेताको राजनीति बचाईदिन शान्तीपूर्ण अवतरण गराउने अपराधी पनि यिनै प्रचण्ड हुन ।
दलका नेताहरुले महिनौं रत्नपार्कमा घाँम ताप्दा पनि नहल्लिएको राजसंस्थाको समूल अन्त्य गर्न २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा मानव सागर उतार्ने प्रचण्डलाई अपराधी नभने के भन्ने ? संबिधानसभाबाट संबिधान बनाउनै पर्छ भनेर अड्डि लिएर संबिधानसभाबाटै संबिधान बनाउन बाध्य पार्ने प्रचण्ड अपराधी नै हुन । जनताको स्वतन्त्रताको पक्षमा बुलन्द आवाज उठाउँदै विगतदेखि वर्तमानसम्म केवल जनताका लागि आफ्नाे सम्पूर्ण जीवन अर्पण गर्ने प्रचण्डलाई मेरो मनले पनि अपराधी नै देख्यो । मेरो हातले अनि मेरो कलमले पनि प्रचण्ड अपराधी नै हुन भनेर लेख्यो ।
प्रचण्ड अहिले तिम्रा दिन अप्ठ्यारा आएकै हुन । मरेको बाघको जुँघा उखेलेर केही भगौडा बहादुरहरुले जुँघामा ताउ लाएकै हुन । तिमी अपराधीमा गणना हुँदा जनताले बोल्ने अधिकार सुरक्षित हुन्छ भने तिमी अझै ठूलो अपराधी बन । तिमीलाई कसैले अपराधीको संज्ञा दिदा जनताको राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित भएको महशुस गर्छन भने तिमी झनै ठूलो अपराधी बनिदेउ ।
केपी ओलीलाई राम देख्ने जमातले मात्रै हो तिमीलाई हराम देख्ने । अन्य तमाम नेपालीले अहिले पनि भन्दै छन् हिजो प्रचण्डले के गर्यो ? हैन आज प्रचण्ड लोकतन्त्रको सुरक्षाको लागि दर्बिलो खम्बा भएर खडा भएका छन् । केपी ओलीको एकाधिकार र सिंगो लोकतन्त्रको बलात्कार र सिंङ्गो लोकतान्त्रिक ब्यवस्था माथिको कुदृष्टिका बिरुद्धमा लडदैछन् । तिमी लडदै जाउ, यिनीहरुले अपराधी भन्दै जाउन । एकदिन जनताले बुझेका छन्, जनयुद्ध गरेर जनताको अधिकारका लागि लडने व्यक्ति अपराधी कि जनताको अधिकार खोस्ने व्यक्ति अपराधी भनेर ।
नेपाल पक्षलाई सडकमा पुर्याउने दाउ, सरकार टिकाउन जसपालाई सात मन्त्रालय १ हप्ता पहिले
के देउवामा पनि ओली चरित्र मौलाउँदै छ ? १ हप्ता पहिले
नेपालका हिमचितुवाले चुमे के वान फेस्टिबल २०२१ को उपाधि ४ हप्ता पहिले
कांग्रेस नेता पौडेलद्वारा स्वास्थ्य सामग्री सहयोग १० महिना पहिले
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा ‘एसईई’ को नतिजा सार्वजनिक ! २ वर्ष पहिले
विदेशबाट फर्किएका १९ जनाको र्यापिड परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ १२ महिना पहिले